काठमाडौं । कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ । किनकी हरेक मानिसका रुची फरक फरक हुन सक्छन् । स्वभाव पनि फरकफरक हुन सक्छन् ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनको सकारात्मक प्रभाव पर्यावरणमा परेको छ । मानिसहरुले जति...
काठमाडौँ । सामान्यतः घरेलु हिंसाको पीडित महिलाहरु हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आंकडाअनुसार विश्...
तीन डलर रकम बोकेर जब ५ वर्षे बालक सडकमा निस्किए....
एजेन्सी । अमेरिकामा पाँच वर्षका एक बालकले आफैँले गाडी चलाएर अर्को गाडी किन्न निस्किएका छन् । उनला...
पुरुषको लिंग १० सेकेन्डमै किन उत्तेजित हुन्छ ?
काठमाडौं । यौन सम्पर्कका लागि वयस्क मानिस तयार रहनु कुनै नौलो होइन । किनकी यो प्राकृतिक कुरा पनि ...
बाघ आफैंँ ट्याक्टरमा चढेर उधुम मच्चाएपछि...(भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश पिलिभितमा कोरोना भाइरसको संक्रमणकाबीच एउटा ब...
यो माछा, जसको मुटु नै तीन वटा किन हुन्छ ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । गहिरो समुद्रमा बस्ने एक रहस्यमयी जीव । समुद्रमा यसलाई हेर्न निक्कै कठिन हुन्छ । त्यसको...